ယူတို့ချစ်ချစ်တွေနဲ့ Romantic ဆန်ဆန် Honeymoon သင့်တဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားကနေရာများ… – Trend.com.mm
လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့ဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ်ကိုသာယာ လှပပြီးအေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတွေမှာ ကုန်ဆုံးချင်ကြပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ဟန်နီးမွန်းထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးတွေကို မပါမဖြစ်ထည့်စဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်နော်…
စာအုပ်ခဲတွေ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ကြည့်ဘူးသလိုပဲ နေေေေ၇ာင်ခြည်ဖြဖြလေးတွေ ၊ စိမ်းဆိုနေတဲ့ သစ်တောအုပ်လေးတွေ ၊ ဖြာကျနေတဲ့ စပျစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ အရမ်းကြည်နုးဖို့ကောင်တဲ့နေရာလေးပါ။ အီတလီရဲ့မြောက်ဘက်အစွန်းပိုင်းမှာ လေထဲဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ပုံလိုမျိုး ဟိုတယ်လေးရှိပါတယ်။ အာ့ဟိုတယ်လေးမှာ ပင်လယ်ရဲ့ အရသာကို ကြည့်ရင်း ဟန်နီးမွန်းညကိုကောင်းမွန်စွာဖြတ်သန့်ပါ။
ကမ္ဘာလှည့်ဧည့်သည်တွေနဲ့ ဟန်နီးမွန်းမောင်နှံတွေ လာနေကြနေရာတစ်ခုပါ။ ဟိုတယ်တွေ ဟာ ပင်လယ်ရဲ့ အနီးနားမှာဖြစ်ပြီး အပျင်းပြေ အနှိပ်ခန်းတွေ၊ ရေငုပ်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုပါ။သူ့ကို ပုလဲပစိဖိတ်လို့လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
3. Paris, France – Europe
အဆောက်အအုံဟောင်းကြီးတွေ ၊ ရုံးအဟောင်းကြီးတွေနဲ့ လက်မှု အနုပညာ များကို စိတ်ဝင်တစားမြင်တွေ့ရမဲ့န်ိုင်ငံဖြစ်တယ်။ စူးစမ်းလေ့လာရတာ ၀ါသနာပါပြီး ရှေးခေတ် အဆောက်အုံတွေ ကိုနှစ်သက်တဲ့စုံတွဲမျိုးစုံ အတွက်Okayပါလိမ့်မယ်။ မြစ်ပေါ်မှာ သစ်ပင်ကြီးတွေ တံတားတွေက အုပ်မိုးထားတဲ့ချစ်စရာ နေရာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။
4. Maldives, Asia
ဟန်နီးမွန်းထွက်မယ်စဉ်းစားလိုက်ရင် ဒီနေရာလေးကို မပါမဖြစ်ပြေးပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ နေချင်စဖွယ်ချစ်စရာအိမ်ငယ်လေးတွေနဲ့ ရေကူးရတာ ရေစိမ်ရတာကြိုက်တဲ့ဇနီးမောင်နှ့အတွက်တော့နိဗ္ဗာန်ဘုံပေါ့နော်။
5. Kauai, Hawaii – USA
စိမ်းပြာလဲ့နေတဲ့ကောင်းကင်၊ အညိုရောင်သဲပြင် ၊ ကြည်ပြာလဲ့နေတဲ့ရေလေးတွေ ၊ ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်နေတဲံဒေသခံအကသမားတွေနဲ့ အရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်းစုလေးတစ်ခုပါ။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ကခုန်ရတာကြိုက်ပြီးရေကူးဝါသနာပါတဲ့အတွဲတွေအတွက် romanticဆန်မဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ။